Olee otú Naghachi Photos si Nokia Lumia 920
Olee otú Naghachi Photos si a Nokia Lumia 920
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos si a Nokia Lumia 920
Featuring preview, wireless Nchaji, Uber-chebaara aka na smartshot, Nokia Lumia 920 emesịala a tọhapụrụ ya. Tinyere Windows Phone 8 usoro, ọ bụ ihe kasị mkpa ngwaahịa nke Nokia. Ọ bụ a n'elu-larịị smart ekwentị. Otú ọ dị, data dị ka elu àgwà photos e site ya nwere ike ka-efu. Mgbe ihu a Lumia 920 data ọnwụ nke, i nwere ike apụ ego ma gị Lumia 920 e synced na Zune na kọmputa gị ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ị nwere, ị nwere ike naputa Lumia 920 data si ndabere mere site na software. Ọ bụrụ na ọ bụghị, i mkpa ịchọta a data mgbake usoro.
Nokia Lumia 920 nwere ike jikọọ na kọmputa na ghọtara dị ka a ike mbanye na kọmputa gị. Nke a pụtara na a data mgbake omume na-ike-naghachi data si ike mbanye pụrụ inyere gị aka. Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac dị otú ahụ a na omume nke bụ ike nke na-agbake photos, music na vidiyo si gị Lumia 920.
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery mbụ.
Igosi Lumia 920 Photo Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ihe mbụ mbụ, ị ga mma nkwụsị eji gị Lumia 920 mgbe foto gị na-efu. Ụdị ọ bụla nke ọhụrụ data nwere ike overwrite gị furu efu photos.
Lee, anyị naghachi foto site na Lumia 920 na Wondershare Photo Recovery maka Windows ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, ị nwekwara ike mezue mgbake na yiri nzọụkwụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Wụnye na ẹkedori Wondershare Photo Recovery omume na kọmputa gị. Pịa "Malite" na-amalite mgbake.
Nzọụkwụ 2 Jikọọ gị Lumia 920 na kọmputa na mgbe ahụ usoro ihe omume ga-egosiputa mbanye akwụkwọ ozi nke ya. Họrọ na mbanye akwụkwọ ozi na pịa "iṅomi" ịchọ furu efu photos.
Cheta na: ị nwere ike pịa "iyo Nhọrọ" hazie scanning N'ihi.
Nzọụkwụ 3 Mgbe iṅomi dị n'elu, niile hụrụ faịlụ site na gị Lumia 920 ga-anatara na faịlụ edemede ma ọ bụ faịlụ ụzọ. Ịnwere ike ihuchalu hụrụ photos tupu mgbake elele ma a usoro n'ezie-enyere gị aka ma ọ bụ. Mgbe ahụ, ị dị nnọọ mkpa họrọ foto na ị chọrọ iji weghachite na pịa "Naghachi" nwetaghachị na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara photos azụ gị Lumia 920 ozugbo ke mgbake. Ma ọ bụghị nke furu efu photos nwere ike overwritten.
1 Ọ dị mkpa n'ezie ịkwụsị iji gị Lumia 920 mgbe gị na photos na-efu.
2 ma e wezụga foto na-agbake site Lumia 920, ị nwekwara ike naghachi audios na vidiyo si Lumia 920 na a usoro.
3 Genius Ụzọ Hichapụ a File Iji na Windows
Acer Data Recovery: Olee naghachi Data si Acer Draịvụ
Olee otú Naghachi Data si formatted kaadị